यसकारण लाग्यो एकता कपुरको टिमलाई चोरीको आ’रोप अन्तराष्ट्रिय | समाचार
यसकारण लाग्यो एकता कपुरको टिमलाई चोरीको आ’रोप अन्तराष्ट्रिय
April 19, 2021 NepstokLeaveaComment on यसकारण लाग्यो एकता कपुरको टिमलाई चोरीको आ’रोप अन्तराष्ट्रिय
यसकारण लाग्यो एकता कपुरको टिमलाई चोरीको आ’रोप
बलिउडमा केहि न केहि फिल्मीकर्मीबीच आ’रोप प’त्यारोप चलिरहन्छ । यसलाई नौलो मान्नु पर्ने कुरै हुँदैन । हालै एकता कपूरको टिमलाई चो’रीको आ’रोप लगाइएको छ । केहि दिन अघि सार्वजनिक गरिएको वेब सिरिज ‘हिज स्टोरी’ को पोस्टरमा फिल्मकर्मी सुधांशु सरियाले चो’रीको आ’रोप लगाएका छन् ।
उनले आफ्नो फिल्म ‘लभ’ को पोस्टर कपूरको समुहले चो’री गरेको भन्दै आलोचना गरेपछि कपूरको टिमले माफी समेत मागिसकेको छ । भारतिय मिडियाका अनुसार कपुरको समुह र प्रोडक्सन हाउस अल्ट बालाजीले माफी मागेको हो । यसै विषयलाई लिएर यसै सिरिजकी अभिनेत्री प्रियामणि राजले आफ्नो समुहले माफी मागीसकेको भन्दै अघि बढ्न सबैलाई आग्रह गरेकी छन् ।
उनले आफूले क्रिएटिभ टिमको काममा दखल नदिन आग्रह गर्दै आफू कलाकार भएकोले निर्देशकले अह्राए बमोजिम काम गर्ने कामदार भएको बताएकी छिन् । अभिनेत्रीले सामाजिक सञ्जालमा लेखेकी छन्,‘फोटो खिच्न बोलाउँदा हामी जाने हो । उक्त समय यस्तो तस्बिर पहिले कसैको थियो थिएन हामीलाई याद नहुन पनि सक्छ ।’
उनले आफ्नो आफु समुहबाट गल्ती भएको स्वीकार गरेकी छन् । गल्तीमा आफ्नो समुहले माफी समेत मागेको सामजिक सञ्जालमा उल्लेख गरेकी छन् । उनले भनेकी छन्,‘ हाम्रो समूहबाट गल्ती भएकै हो । यो गल्तीका लागि माफी समेत मागेका छौ । अल्ट बालाजीले आफ्नो गल्ती स्विकारेर माफी मागेको देख्दा खुसी लागेको छ । यो पोस्टर अहिले हटाइ सकिएको छ ।’
उनले एउटै विषयमा अड्किएर कहिलेसम्म बस्नुपर्ने हो भन्दै प्रश्न गरेकी छन् । उनले थप भनेकी छन्,‘ यही विषयमा कहिलेसम्म अड्किएर बस्ने हो र ? गल्ती भयो ,माफी मागि सकेपछि अबअघि बढे हुन्न र ?’ यस वेव सिरिज समलिङ्गीको कथामा निर्माण भएको हो । यस सिरिजमा उनी सत्यदीपकी श्रीमती साक्षीको भूमिकामा अभिनय गरेकी छन् । यसमा सत्यदीप र प्रियामणिको साथमा मिश्रा, मृणाल दत्तको समेत मुख्य भूमिका रहेका छन् । यो वेव सिरिज २५ अप्रिलका दिनमा जी ५ बाट प्रसारण हुँदैछ ।
भावपुर्ण श्रद्धाञ्जली: सुदूरपश्चिममा सवारी दुर्घटना हुँदा ३१ जनाको मृत्यु
झापामा फेरि गौतमको ला,स कुकुरले टो,क्दै गरेको भेटियो, बिचरा! छोरी रुदै मिडियामा, चल्यो रुवा,,बासी, मासु ब्यापारी मृ,,त भेटिए बल्ल खुल्यो डर,लाग्दो भित्री रहस्य र नालीबेली (भिडियो सहित)